IApartment eNtsha yangoku (Iqhagamshelwe kuMall wokuThengisa) - I-Airbnb
IApartment eNtsha yangoku (Iqhagamshelwe kuMall wokuThengisa)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDedy
Le studio yanamhlanje kwaye ithokomeleyo ikwindawo ekuMantla Jakarta- Pluit, imizuzu engama-30 ukusuka eJakarta CBD kunye nesikhululo seenqwelomoya. Ikwaqhagamshelwe kwi-Baywalk Mall. Kwi-mall yase-Baywalk, uya kuba nakho ukufumana iindawo zokutya zasekhaya kunye nezamazwe ngamazwe ezifana ne-Kenny Roger's Roasters, i-Han Gang, i-Duck King, i-Nama Sushi kunye nezinye ezininzi. Ukonwabisa, uneCinema, abantwana indawo yokudlala yangaphakathi, i-arcade, i-tennis yetafile kunye neendawo ezininzi zokuthenga. Kukwakho nevenkile enkulu ukuze kube lula kuwe.
Igumbi le studio elifakwe ngokupheleleyo kunye nebhedi ekhululekileyo yobukhulu bukakumkanikazi. Kumgangatho wama-30 apho unombono wedama lokuqubha. Indlu ine-air conditioning epheleleyo enebalcony ukonwabela umbono omhle.
Izinto ezibonelelweyo: Ibhedi, imiqamelo, into yokuthuthuzela, itawuli yokuhlambela, iitawuli zesandla, ishampu, isepha, isomisi seenwele, iihanger, iphepha langasese, ikofu kunye neti. Qiniseka ukuba iilineni ziyahlanjwa ngalo lonke ixesha phakathi kweendwendwe. Isifudumezi samanzi esifakwe kwishawari. Iketile yombane kunye nezixhobo zikwakhona.
Isantya sasimahla se-intanethi engenazingcingo kunye ne-cable tv.
4.78 · Izimvo eziyi-116
I-Pluit kunye ne-Muara karang (imizuzu emi-5 ukuya kweli-10 ngemoto) Ukutya okuninzi okumnandi kuloo ndawo.
Pantai Indah Kapuk (imizuzu eli-10-15 ngemoto) Iindawo ezininzi zokutyela ezintle, ikhefi, iibhari, ulonwabo, udederhu lweevenkile iPik Avenue, ibala yegalufa kunye nesibhedlele.
I-Jakarta Old Town (imizuzu engama-30 uqhuba)
IMangga Dua (imizuzu engama-20-30 uqhuba)
I-Ancol kunye nehlabathi lolwandle (i-20-30 imizuzu yokuqhuba)
Umbuki zindwendwe ngu- Dedy
Ukunxibelelana neendwendwe- andihlali eflethini kwaye ndiqhele ukuhlala kufutshane. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ukuba ufuna naluphi na uncedo. Ndiyavuya kakhulu ukukunceda ngokuhlala kwakho. Ndisazi kakuhle isiNgesi, isiMandarin kunye neBahasa Indonesia. Ukuzihlola kuyafumaneka. Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Ukunxibelelana neendwendwe- andihlali eflethini kwaye ndiqhele ukuhlala kufutshane. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nam ukuba ufuna naluphi na uncedo. Ndiyavuya kakhulu ukukunce…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Penjaringan